Manjavona Indray ny Mpitoraka Blaogy ao Etiopia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2018 12:54 GMT
Efa fanindroany indray tamin'ity herinandro ity ary tao anatin'ny fito volana no nanjavonan'ny ankamaroan'ireo blaogera ao Etiopia tsy ho hita eo amin'ny efijerina solosaina Etiopiana.
Voasakana avokoa ireo tranonkala rehetra nampiantranoan'ilay sehatra Blogspot malaza rehefa niezaka ny niditra tao amin'izy ireny tamin'ny alalan'ny fifandraisana lavitra amin'ny fidirana an-tambajotra an'ny Orinasa Telecom Etiopiana ireo mpampiasa aterineto.
Ilay tranonkala madinika an'ny blaogy mpanohitra ny fanjakana izay ampiantranoan'ny sehatra Nazret.com – ahitana ny Urael sy ny EthioBlog – dia mbola tsy azo nidirana ihany koa (efa hatramin'ny volana Mey izy ireo no tsy afaka novakiana intsony tao Etiopia).
Ny sasany amin'ireo blaogera ireo dia haingana tamin'ny fanomezan-tsiny:
Ity ezaka avy amin'ny fanjakana mba hanasivanana tanteraka ny vaovao rehetra ao anatiny sy ivelan'i Etiopia ity dia ezaka mafy mba hitazonana ireo olom-pirenena ho tsy mahay na inona na inona sy tsy ho tonga saina
hoy ny nosoratan'ny Ethiopian Politics tao amin'ny MANAKANA NY BLAOGY INDRAY NY FANJAKANA ETIOPIANA!!
Mety ho sarotra ny hahatonga ho dona mafy ny nahavoasakana indray ireo olona toa an'i Seminawork tao Etiopia. Ny tena mahakivy dia hamaivanin'ireo mpanao gazety ny mikasika izany fanakanana izany satria handainga momba izany ireo manam-pahefana eto rehefa hanontaniana. Fahatsiarovana ho an'ireo ‘hacks': Voasakana ry zareo. Teboka. Tsy ‘miisitery’ izany
hoy ny nosoratan'i Addis Calling tao amin'ny Ethiopia Websites are Blocked / Voasakana Ireo Tranonkala Etiopiana .
Toa tsy dia dona be tamin'ny Seminawork izany. Nanampy tny fanampiny (PS) fotsiny tamin'ilay lahatsoratra nosoratany mikasika ny Great Ethiopian Run izy, nanambara hoe:
PS: Voasakana avokoa ny tranonkala rehetra mpandàka demaokrasia ao Etiopia. Ireo blaogy tsy mbola naverina novahaina tao anatin'ny telo volana lasa izay dia voasakana indray ary anisan'izany ity blaogy ity.
Nahatsikaritra ireo fanjavonana i Markmedia tao anatin'ny lahatsorany Misakana ireo blaogera ny fanjakana Etiopiana:
…misy hetsika fanakanana tranonkala Etiopiana be dia be [sady ao no avy ao]. Tsy afaka miditra amin'ireo blaogy ampiantranoana iraisam-pirenena aho avy aty Addis. Fanakendana ny fahalalahana maneho hevitra ary ezaka mazava be hanakanana ny fikorianan'ny vaovao ao sy mikasika an'i Etiopiana tsy ho any amin'ny mponina ao aminy izany.
Tsy vao voalohany no nampiasana ity tetika ity.
Fomba fijery iray mahaliana no nivoaka tao amin'ny Aza Hanina ny Buchela-ko!, blaogy vaovao nosoratana ”Etiopiàna Amerikàna Mijanona Ao An-tranon'i Mama ao Dalian, Shina.”
Namaritra ny hatezerany izy nanoloana ilay fanivanana miparitaka manerana ny aterineto ao Shina tao amin'ny Information Highway… Detour Please!. Ary nanamarika lafiny hafa mifanitsy aminy :
Nitady torolalana tao amin'ny googla mba hanaovana sakafo injera aho ary maro ireo pejy tiako hojerena no tsy nisokatra. Ny tena nahaliana kokoa, ireo pejy (ara-politika) izay voabahana ao Etiopia dia tsy nisokatra ihany koa. Tena mba niandry fatratra ny hahita azy ireo aho rehefa tonga taty. Tsy nahafantatra aho na kel aza hoe voasakana ny zavatra sasany mikasika an'i Etiopia. Fantatro fa nampiasa Shinoa manampahaizana manokana ny Fifandraisandavitra Etiopiana mba hanakana ireo tranonkala ara-politika saropady tsy ho hitan'ny masom-bahoaka … mety ireo manampahaizana nanao izany tany Shina ihany ve no nanitatra ny tolotra nomeny ho any amin'ny fanjakana etiopiana mba hanakana ny tranonkala sady ao Shina no ao Etiopia?
Ny blaogy tao amin'ny blogspot-n'i Etiopia no voalohany nanjavona tamin'ny efijerin'ny solosaina Etiopiana tamin'ny volana Mey (jereo eto sy eto ny tatitra nataon'ny GlobalVoices). Telo volana taty aoriana izy ireo no niverina, mba hanjavona indray tamin'ity herinandro ity.
Nandà ny fandraisany anjara tamin'izany ny Fanjakana Etiopiana sy ny mpandraharahany mpanao ampihimamba, Orinasam-Pifandraisandavitra Etiopiana.